''Gadaan Meelbaa gadaa qabbanaati, gadaa horataati'' - ! - OBN
''Gadaan Meelbaa gadaa qabbanaati, gadaa horataati''
[OBN 07 02 2011,Adaamaa]:- Torban muraasa dura miseensi Gadaa Birmajii Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo baallii isaanii miseensa Gadaa Meelbaa Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaaf dabarsaniiru.
Namoonni tokko tokko bara Gadaa Birmajii mootummaan ni jiijjiirama jedhani himu. Waan Bara Haayilasillaasee ta'eefi kaan ni eeru.
Kuni dhugumaa lataa jennee qorataa seenaa Obbo Alamaayyoo Haayilee gaafanneerra.
Miseensonni Gadaa shanan eenyu faa'i?
Obbo Alamaayyoo- Nuyi asiitti miseensa jenna. Gara Kibbaatti Booranni gogeessa jedha. Boorana keessatti maqbaasaa torbatu jira. Garuu baalliin isaa shanuma. Asiitti maqaanis shan miseensis shanuma. Miseensonni Gadaa shanan kuni Birmajii, Meelba (Beelbaa), Halchiisa (Michillee), Duuloo fi Roobaleedha. Akka paartii shaniitti fudhachuu dandeenya. Yeroo isaan biyya itti bulchan waggaa saddeet saddeetin qoodama jedhan obboo Alamaayyoonni akka BBCn isaan dubbiseetti.
Yeroon isaan itti bulchaniifi aangoo itti walii dabarsan waggaa saddeet saddeetiini.
Miseensonni Gadaa Tuulamaa walitti dhufeenya akkamii qabu?
Obbo Alamaayyoo- yeroo baayyee Gadaan walfaana taa'anii seera waliif kennu, aangoo dabarsanii waliif kennu jechuudha. Saniin ala warri jiran garuu hirkata waliif tahu, walgargaaru. Miseensonni Gadaa shanan walgargaaru, walto'atu, waltumsaa deemu jechuudha. Akkas godhu malee ani Gadaa kiyya fixadheera jedhanii galanii mana taa'uun sirna Gadaa keessa hin jiru. Ijoolleenis waan hojjetan qabu. Hojiin garee fi dirqamni garee ni jiraata jechuudha.
Wanti miseensonni Gadaa ittiin beekaman jiraa?
Obbo Alamaayyoo- hunduu miseensa isaa jaalata, ni leellisu. Fakkeenyaaf amma Birmajiin yoo leellisan 'Birmajii lolaa' jedhu ni miidhakfatu.
Roobaleenis 'Roobalee michuu roobaa, Gadaa roobni hin dhabamne, kan misoomni itti hin dhabamne' jedhanii gadaasaanii jajatu.
Duuloonis 'duulli hin dhabamu. Duulani injifatu, hammeenya cabsiti' jedhu.
Michilleedhaanis 'michuu lolaa' jedhuuni. Beelbaanis akkasuma ' kan beela bahan, kan qotee quufa fidu kan beela oolchu , Gadaa gabbattuu, quuftuu' jedhuuni.
Gadaan Meelbaa gadaa qabbanaati, Gadaa hojiiti, Gadaa horataati. Kan amma aangotti dhufte jechuudha Gadaan Meelbaa. Duriyyuu hangafa turte Gadaan kuni. Ni jaalatamas. Jijjiirama Odaa Nabee irratti hangafooma Birmajiin fudhate jedhu maanguddonni dur.
Hiiknisaas 'beela-baha' akka jechuuti.
Seenaa keessatti barri Gadaa Meelbaa akkamitti yaadatama?
Obbo Alamaayyoo- Gadaan Tuulamaa kuni adda ciccitaa har'a gahe. Cunqursaa abbootii irreetin Godaansii fi walitti dhufeenyi abbootii Gadaa hin turre yeroo dheeraaf. Dhoksaadhumaan walii dabarsaa walii dabarsaa dhufan. Dhihoo kana Gadaa sadan (Gadaa Roobalee, Birmajjii fi beelbaati)socho'uu kan eegale. Gadaan kuni reefu haaromfamaa jira Tuulama keessatti. Waggaa dheeradhaafis waan adda citee tureef akka Gadaa Booraanaa fi Gujii sanatti waggaa kanatti kun tahe jedhamee wanti qoratamee adda bahe hin jiru.
Gadaan meelbaa Gadaa jijjiiramni mootummaa itti jiraatudha jedhu namoonni. Isin maal jettu?
Obbo Alamaayyoo--- ( kolfa) …warri Gadaa isaanii gabbisuu barbaadan Gadaa isaanitiin dhaadatu, dhugaadha. Gadaan Beelbaa kuni yeroo itti sirni Dargii mootummaa Hayilesillaaee itti fonqolche ture. Kanarraa ka'anii namoonni akkas jedhanis jiru. Yeroo sana mootummaan sirna bulchiinsasaa waliini kan kufe. Falaasama bulchiinsaa tokkorraa gara kan biraatti cehame jechuudha. Amma ammo jijjiirama yeroo jennu namootatu jijjirame malee sirnichi jira ammayyuu.
Hiika hirmaannaan Abbootiin Gadaa sirna siyaasaa biyyattii keessatti qabaatu
Kanaaf akkan ani hubadhutti jijjiirama mootummaa jechuun jijjiiramni waliigalaa yoo jiraatedha. Amma kan tahaa jiru garuu Rifoormiidha. Garuu Gadaan hundumtuu bara Gadaa isaaniitti jijjiiramni akka jiraatu ni ibsu, ni dhaadatu. Birmajjiinis Gadaa kiyya keessa kuni tahe jedha, Roobaleen, Meelbaan ,Duuloonis, Michilleenis Gadaa isanii ni jaju.
Michilleen fakkeenyaaf Gadaan kamuu akka Gadaa kiyyaa hin lolu jedha. Bara Ahimad Giraanyi kan rukutee kara bahaatin humnoota Arabaa kan kuffise ana jedha. 'Azaloo' irratti. kanas seenaan lafa kaa'ee jira.
Birmajjiin ammo dhaqee hamma Goojjam gahutti kan biyya wlaiin gahe isa jedhu. Beelbaanis akkasuma hundisaa seenaarratti galmaahee kan taa'edha.